Ekpere nye San Marcos de León. ? ka ịdị mma, ọrụ na ịhụnanya.
Ekpere San Marcos de León. Ekpere niile dị ike, mana ekpere toint mark leon trara onwe gi, maka ihunanya, oru na ikwuputa ya bu ihe puru iche ebe Saint Mark no Jesus nso.
Oziọma San Marcos bụ ihe kachasị mkpa ebe ọ nwere ụdị nke uche nwata, dị ka ọ dị Marcos n'oge ahụ, nke na-eme ya nsụgharị na-enweghị ntụpọ na eziokwu zuru oke na-emetụta onye ọ bụla na-agagharị na ha leta.
Taa, San Marcos abụrụla ụzọ dị mma isi jụọ Chineke maka arịrịọ niile siri ike, n'agbanyeghị ụdị ọrụ ebube a tụrụ anya ya nwere ike isi.
Saint Mark, enyi Jisos, ghuru enyi ndi nile n’enwe nkpa n’obi ha ma choro ka emee ha amara site n’eluigwe.
1 Ekpere Saint Mark nke Leon na-arụ ọrụ?
1.1 EKPERE diri Saint Mark nke Leon iji mee ka mmadu mara ihe
1.2 Ekpere San Marcos de León maka ịhụnanya na-agaghị ekwe omume
1.3 Ekpere nke Saint Mark nke Leon maka oru
1.4 Ekpere biara ibia | ịhụnanya
Ekpere Saint Mark nke Leon na-arụ ọrụ?
San Marcos de León nọ Jesus Christ nso mgbe niile, n'ihi ya na-arịọ ya ka ọ bụrụ nke ọma, n'ihi na ọ na-arịọchitere anyị arịrịọ n'ihu enyi ya.
Ekpere Ha kwesiri ime omimi nkpuru obi y ezi obi g'esi kwe omume, cheta na anyị na-arịọ maka ọrụ ebube ma ọ bụ ka e dozie ọnọdụ, ọ bụ ya mere ị ga-eji jụọ ajụjụ doro anya ihe achọrọ.
Ekpere Saint Mark nke Leon bụ otu ihe. Okwesiri okwukwe.
Saint Maros maara ihe ọ bụ ịhụ enyi ya ka ọ nwụrụ, ọ ma ihe ọ bụ ikwusa okwu Chineke mgbe a na-akpagbu ya, ọ tara ahụhụ nhụjuanya na iru uju, ụjọ nke amaghị ama na nsogbu niile enwere ike ịta ahụhụ.
Nke a bụ ya mere Kedu mgbe ị na-arịọ arịrịọ ọ naghị egbu oge ịzaghachi, n’ihi na ọ matara ihe a ga-ata ahụhụ n’ụwa ebe a, ọ bụkwa ugbu a ka anyị na ya ga-enyere anyị aka n’eluigwe.
Ike ya bu infinito, ọtụtụ ọrụ ebube ya. E nwere ọtụtụ puku mmadụ nwere ike ịgba akaebe banyere ike ya, nke a bụ ihe kpatara ya ekpere San Marcos de León dị irè.
EKPERE diri Saint Mark nke Leon iji mee ka mmadu mara ihe
San Marcos de León gị onye buuru okwu Kraịst maka ụwa nụrụ ekpere m.
Ka ike gị na mkpebi gị nweta ikpe ziri ezi na ike ndị iro m ada ada n'ihu ezi San Marcos, na ike nke Agụ na ike ọchịchị ya na-eme ka ndị chọrọ ime m ihe ọjọọ gbue ikpere n’ihu Chukwu ma gbanwee obi ha.
Rịọrọ m arịrịọ n'ihi gị, onye nyefere ndụ gị iji mee ka a mara okwu nke Onye Kasị Elu, ma gee ntị n'arịrịọ m.
(Anyị na-arịọ arịrịọ)
Achọghị m ihe ọjọọ ọ bụla na ya, naanị iji mee ka ndị merụrụ m arụ ma merụọ m ahụ wee wee laghachikwute m n'ụzọ dị nro na ihu ọma.
Ka ihunanya merie ihe ọjọ na ndu m buru udo ebe a na aju m ajuju n’aha Jisos Kraist Onye nwe anyi, a na m ario gi ka i gee nti n’ekpere m.
Enwere ike ikpe ekpere maka ihe ọ bụla ma ọ dịghị nke na-achọ ọdịmma onwe ya naanị ma ọ bụ nke dị mkpa ma ọ bụ nke dị mkpa karịa ihe ọzọ.
Mmadu niile gabigoro ihe anyi choro ịrịo n’iru igwe ka anyi nata ihe anyi choro.
El juo izu ike Mmadu bu, otutu oge, ihe nke ndu ma obu onwu.
Enwere ike itinye ya n'ọtụtụ ụzọ, dịka n’ebe ọrụ, ebe obibi, ya na onye ikwu o enyi y amor.
Site na ekpere a agula ime ka ndi ozo jua ime ihe ichoro ma obu mee ka ichota ihe di nkpa nke g’eme ka ndi nile n’agba tinye obi uto.
Ekpere San Marcos de León maka ịhụnanya na-agaghị ekwe omume
Gọziri agọzi Saint Mark nke Leon, gị onye na - eme ihe niile agaghị ekwe omume, onye zidoro dragọn na ọdụm ahụ. Mee (aha mmadụ) chọpụta mmetụta m, ịhụnanya m, ịchụ-aja m.
A na m arịọ gị arịrịọ ka ejiri ọkụ nke ihunanya gosipụta obi gị na-enweghị ekele. Mgbe iteta n'ụra gị, achọrọ m ka ị chee maka m.
Ewoo, San Marcos de León, gị onye buworo ọgụ ma jisie ike wepu anụ kacha ike, yabụ a na m arịọ gị ka ịhapụ igwepịa m tụbara m anya, bịanụ, ka onye ọ bụla kwụsị ya, ka ekwe Okporo ụzọ ịhụnanya na-emekọ ihe ọnụ maka gị, na ị hụrụ m n'anya n'otu ike m hụrụ m n'anya ma na-efe gị.
Maka echiche nke dị (aha onye ahụ) abịakwute m gị, Saint Mark, ka ị wee rọọ nrọ gị na nrọ gị bụrụ aha Chineke, sitekwa na mụ, ka ịhụnanya gị chekwaa obi m, ka m nọrọ n'echiche gị. .
Nyere m aka gwọọ obi a nke enweghị mmasị gị ma mee ka nhụjuanya m niile bụrụ nke ịhụnanya gbanwere.
Ọ dị mkpa mgbe niile ikpe ekpere San Marcos de León maka ịhụnanya.
Lovehụnanya bụ otu n’ime ihe mere mmadụ niile ji bụrụ ndị mmụọ na mkparịta ụka mgbe niile.
Ma ọ bụ ghara inyeghachi ya kedu ụfọdụ nsogbu na-aga na di na nwunye ahụ ekpere maka ịhụnanya San Marcos de León dị ike.
N ’ụdị arịrịọ a, mmadụ ga-eji obi eziokwu kwuo okwu. Cheta na anyị na-agwa onye tara ahụhụ ahụhụ n'ụwa a ihe mere na ọ bụ ya mere ọ ga-eji mara anyị nke ọma.
Mgbe ị na-ekpe ekpere na obi abụọ adịghị ike a na-ahapụ ka emee ka ikpe ghara ibilite, ọ bụ ya mere a ga-eji okwukwe jụọ ya, kwenye na onye okike Chineke nke ihe niile ga-adị njikere inyere anyị aka, nke na-abụghị n'efu. oge anyi tinye ego na ikpe ekpere.
Ikpe ekpere n’enweghị okwukwe dịka enweghị ihe ọ bụla na mgbe ị na-achọ arịrịọ nke metụtara ịhụnanya, okwukwe bụ ihe nzuzo ga - enyere aka dozie ihe niile ngwa ngwa.
Ekpere nke Saint Mark nke Leon maka oru
Lee Mar Sancos de León, a ga m eji obi umeala na-akwanyere gị ugwu!
Ka ịbịaru nso n’ihe ị sị n ’anya; Ka ito otuto gị na-enweghị njedebe.
Dịka onye ji ikwesi ntụkwasị obi jeere Chineke ozi, ejirila m obi m niile rụọ ọrụ Chineke, jirikwa Akwụkwọ Nsọ dị nsọ mee ka mmụọ m sie ike.
O bu ya mere, onye nkwusa ozioma nke an’ahu n’anya, a na m ariọ gi taa ka nye m amara ahu nke imere na mbu ...
(Gwa ihu ọma n'ihe banyere ọrụ)
Know mara na m chọrọ naanị ọdịmma nke onwe m na nke m naanị ịbịaru Onyenwe anyị nso. Amaara m na m ga-anụ n'ihi na ...
Only bụ naanị ebere.
Jụọ San Marcos de León maka ihe metụtara ndụ ọrụ anyị Ọ bụ nzube nke oke mkpa.
Ebe ọrụ anyị bụ ihe dị n’ụlọ nke abụọ anyị ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ awa anyị na-anọ ebe ahụ, ọ bụ ya mere ọtụtụ oge enwere ọnọdụ anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị ejiri okwukwe na-ekpe ekpere ka ọ bụrụ ihe ngwọta.
Ekpere a nwere ike ibute ọrụ nke anyị na-eche oge ụfọdụ ma ọ bụ iji dozie nsogbu ọ bụla na-egbochi ọrụ anyị ịkwanye nke ọma, ọrụ ọ bụla ị nwere ike ịnwere ike ịrịọ na San Marcos ọ ga-enyere gị aka.
Ekpere biara ibia | ịhụnanya
N’aha Chineke ka m na-akpọku gị, mmụọ nke ike mmụọ nke St Cyprian, na nkụda mmụọ Don Juan nke okporo ụzọ, mmụọ nke John miner Nke okporo ụzọ, okporo ụzọ, na ebe nile, mmụọ nke ikuku anọ nke mmụọ nke St Mark nke Ọdụm.
Ana m eme gị nke a ekpere ka senti akara ọdụm na-abịa Ekwere m gị nkwa inyere m aka inwe ọgụgụ isi ise.
Echiche, ikpe ahụ, na uche nke (aha onye) Enweghị m ike iri ihe ma ọ bụ hie ụra, enweghị m ike ị drinkụ mmanya ma ọ bụ ije ije.
Ka echiche ya dịkwasị m naanị ruo mgbe m ga-akwụsị ya n'ụkwụ iji mee ka m chegharịa ma wedata m ala wee sọpụrụ m.
Ejiri m 2 hụ gị, mụ na gị atọ kere gị agbụ, ọbara m na-a drinkụ ya na obi m na-enye gị anya m na-eleghara gị anya, ọ bụkwa gị ka ọ dị, ka ọ dịrị.
Anyị chọrọ mechie edemede anyị na ekpere nke San Marcos de León nke ahụ bia ka ihu ihunanya.
Ọ bụ ekpere siri ike ma ama ama.
A na-ekpegara St Mark na San cipriano.
Lelee ekpere abụọ dị ike iji nweta ọrụ ngwa ngwa